Seenaa Solomoon fi Eliyaas Kifluu
Himannaan yakkaa fi shoroorkaa kan irratti dhiyaate artiistoonni Oromoo 6 fi namnii hojii humnaa guyyaa guyyaan jiraatu namnii tokko har’a mana murtii fedeeraala olaanaa kan Lidataa dhaddacha 19ffaa duratti kan dhiyaatan har’a ture.
Artistoonni kunis, Olyaad Baqqalaa, Moii’bul Misgaanuu, Haayluu Naccoo, Ifaa Gammachuu, Qananii Tammiruu, Seenaa Solomoon fi Eliyaas ta’uun beekamee jira.Isaan kana keessaa 5 dhiira 2 shamarran ta’uun kan ibsamee yoo ta’u himannaan yakkaa irratti dhiyaate uummata kakaasuun humnaan mootummaa aangoo irraa darbuuf yaalan ka jedhu ta’uun beekamee jira.
Himannaa shoroorkaa irratti dhiyaateen kan ilaaleen kan ofii isaa Adda Bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu waliin qunnamtii qabuu, waan biyya keessa jiru ABO tti gabaasuun ABO biyya alaa jiru irraa dhaamsa fudhanii biyya keessatti facaasuun jedha. Ergama ABO fudhatee himatamtoota kana kan gurmeessee nama Obbo Girmaa Xurunaa jedhamu akka ta’e himannaa dhiyaate irratti barreeffamee jira jedhu Abukaatoon Himatamtootaa Obbo Wandimmuu Ibsaa.Garu Girmaa inni qindeesse jedhame himannaa irra ituu jiruu jarreen kana waliin hin hidhamiin hafuun gaaffii guddaa ta’u Obbo Wandimmuun dubbatanii jiru.
Obbo Girmaa Xurunaa ammaan dura namoota maqaa Afoshaa jedhuun naannoo Bolee Bulbulaa jiran gurmeessee lafa walitti qabamanii jiranti alaabaa ABO itti raabsuun akka isaan qabaman godhe jechuun hidhamtoonni dubbatanii akka turan kan yaadachiisan Obbo Wandimmuun yeroo sanas mootummaan himannaa irratti hin dhiyeessiin hafuu yaadachiisu.
Obbo Girmaan yeroo sana Raadiyoo sagalee Amerikaa sagantaa Afaan Oromoo irratti dhiyaatanii akka ibsanti gocha kana keessaa harka hin qabu jechuun isaanii ni yaadatama.